Ihe 12 na - emetụta Usoro Email International Gị | Martech Zone
Anyị enyerela ndị ahịa aka imekọ ihe ụwa (I18N) na, tinye ya, ọ bụghị ihe ọchị. Nuances nke ngbanwe, ntụgharị asụsụ, na nhazi asụsụ mee ka ọ bụrụ usoro dị mgbagwoju anya.
Ọ bụrụ na ọ meela ihe ọjọọ, ọ nwere ike ịbụ ihe ihere na - eme ihere… ịghara ịkpa oke. Mana 70% nke ndị ọrụ ijeri 2.3 nke ụwa abụghị ndị na-asụ Bekee na $ 1 ọ bụla e mere na mpaghara achọtara nwere ROI nke $ 25, yabụ ihe mkpali dị maka azụmahịa gị ịga mba ofesi ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
Ndị mọnk Email etinyela akwụkwọ ozi na aga ahịa email gị zuru ụwa ọnụ atụmatụ nke na-enye ihe iri abụọ na-emetụta ọganiihu ahịa email gị.
Ntụle Asụsụ na Detuo - mee nyocha asụsụ gị dị iche iche iji zere okwu ndị nwere ike imetụta nnapụta.
Họrọ ndị ntụgharị - o zughi iji ghọta otu esi atụgharị asụsụ, ihe ntụgharị ntụgharị gị ga-aghotarịrị ọdịnaya ahụ.
Email Aesthetics - atụmatụ nke email gị kwesịrị ịnakwere ndị na-ege gị ntị.
Nhazi usoro - site na imewe na ntụgharị site na ịkọ akụkọ, ị ga-enwe ike ịlele mmetụta nke mbọ gị na mpaghara.
Nhazi ozi na nghazi - RTL (Aka nri gaa aka ekpe) ma ọ bụ asụsụ etiti ziri ezi nwere ike ịchọ nhazi kachasị na otu ọ bụla.
Atụmatụ Mbụ nke Mobile - ọ bụrụ n ’mba ofesi, ị yikarịrị ka ọ na - agagharị agagharị! Better ga-kachasị mma maka obere windo na nlele anya.
Okpokoro Iwu - dị njikere na ị bụ kwekọrọ n'iwu nke mba ọ bụla iji hụ na ị naghị emebi iwu ọ bụla ma bulie mgbapụta na ndị na-eweta ọrụ localntanetị mpaghara.
Personalization - ịgbanye ozi ịntanetị mba ụwa na-agbasawanye ụdị nke onwe ị nwere ike ịme iji nwekwuo oghere, pịa na ntụgharị.
Kpọọ-na-Action - Agafela na nkwupụta gị ka ị na-anwa ime ka ndị debanyere aha pịa, mba ụfọdụ nwere iwu siri ike karị gbasara mgbasa ozi na nkwalite.
Oge oge - Oge, oge ezumike mpaghara, na usoro ọrụ nwere ike ịmetụta ọnụego gị na ịpị-ọnụ.
Nchịkọta data na ndepụta - Debe ndepụta gị na-arụ ọrụ ma dị ọhụrụ, na-eme ka nkọwapụta na nzacha ikike site na mpaghara zuru ezu.
Pestle - na-anọchi anya ndọrọ ndọrọ ọchịchị, akụ na ụba, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, teknụzụ, iwu na gburugburu ebe obibi. Kpachara anya na mmetụta dị n’ozi ị na-enwe n’echiche ndị a.
A bụ dum infographic, lelee nsụgharị mmekọrịta na Ndị mọnk Email.
Tags: olumbaemail kooduozi infographicemail mba uwaemail mba uwaemail mpagharaemail mpagharandị mọnk emailemail mọnk infographicntụgharị asụsụ emailngbanwentughari mmaduntụgharị asụsụ igwepestleaka ekpertlIhe owuwu spamtranslationgịnị bụ pestle